Ireo fomba iadiana amin’ny kentrona
Vehivavy mitondra môtô “Bol d’or”…niara-nitsangatsangana omaly
Fikambanan’ireo vehivavy mpanamory sy mpankafy ny karazana môtô lehibe sy mandeha mafy « Bol d’or » eto Antananarivo ny The Litas.
Toamasina Voalevina i Honorette sy i Kenzo kely
Nalevina omaly, tany Tsaratampona fokontany Antsikafoka, Kaominina Mahambo, distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana, ny vatana mangatsiakan’ilay renim-pianakaviana bevohoka 3 volana sy ny zanany lahikely 4 taona, novonoin’ny mpiasan’izy ireo, tany Toamasina.
Teknika tsotra mamotsy ny tarehy
Miankina amin’ny fahazarana sy ny fikoloana ny tarehy isan’andro no hananana hodi-tava tsara kalitao, na inona na inona lokony sy sokajiny.
Ranona sakamalao : Sady mandoro tavy no mampidina tosi-drà
Manampy be dia be amin’ny fampihenam-batana ny ranona sakamalao satria mandoro ny tavy hatramin’ireo sarotra esorina indrindra. Mampidina ny tosi-drà ihany koa ity zava-pisotro ity ary mampihena ny tahan’ny kôlesterôly.
Hanitra, namoy anaka…Mitantara ny iainany!
Renim-pianakaviana nivelona tamin’ny fivarotana lamba sy kojakoja plastika i Hanitra. 3 taona lasa teo ho eo anefa izay dia narary ny zanany vavy, izay vao 4 taona ary tsy maintsy niatrika fandidiana tamin’ny lohany.
Jus papay, manafisa-kibo sy mamotika ny tavy ao anaty
Manadio ny tsinay sady manampy manala ny tavy rehetra ao anaty indrindra ny eo amin’ny kibo ity zava-pisotro atolotra anao ity.
Miora, ilay maty tanaty Ethiopian Airlines : Nikasa hody aty hanao vakansy
Anisan’ireo nodimandry vokatry ny loza an’habakabaka nahazo ilay fiaramanidina lehibe an’ny Ethiopian Airlines ny alahady lasa teo, tany Addis Abeba i Miora Kuric. Gasy ray sy reny i Miora, saingy tsy mizaka ny zom-pirenena Malagasy intsony rehefa natsangana mpivady tera-tany frantsay monina tao Belgique. Avy any ambanivohitr’i Moramanga any no tena fihaviany, ary zanak’olona tena sahirana sy kely anaka any an-toerana izy.
Rehefa mipoitra ny kentrona dia saika mihazakazaka mamafa izany daholo ny vehivavy. Alohan’ny hampiasana akora manaisotra azy ireny anefa dia mila fantarina ireo antony nahatonga azy, ny akora mifanaraka amin’ny hoditra, ny fihetsika tokony atao, …
Eo amin’ny maso sy ny molotra
Tsy mitovy ny fisehon’ny kentrona eo amin’ny hoditry ny vatana. Ireo faritra azon’ny masoandro foana dia mora mikentrona kokoa noho ireo takontakona. Ireo faritra ipoiran’ny kentrona voalohany kosa dia ny manodidina ny maso sy ny manodidina ny molotra. Marefo sady manify mantsy ny hodi-maso no sady io faritra io koa no mihetsika indrindra amin’ny vatana isan’andro. Eo amin’ny faha-25 taona eo no manomboka hita soritra tsikelikely ny firorahan’ny hodi-maso. Ny kentrona vokatry ny fihetsika atao, noho ny fihetseham-po kosa, no hita manodidina ny maso. Ny hoditra manamorona ny molotra indray dia eo amin’ny faha-30 taona no manomboka tazana mikentrona.
Inona no mahatonga ny kentrona ?
Betsaka ny antony mitarika ny kentrona. Ny fahanteran’ny hoditra kosa anefa no isan’ny voalohany amin’izany. Mety ho avy amin’ny fomba fiaina (tsy ampy torimaso, mifoka sigara, misotro alikaola, …) , avy amin’ny fikorontanan’ny tsiry mpanentana, na efa manaranaka mihitsy, no mahatonga ny hoditra ho antitra aloha loatra, na ho antitra taraiky kokoa. Manimba hoditra haingana be ihany koa ny masoandro ary mitarika ny fahanterany. Noho izany dia ilaina ny mampiasa “écran solaire”, na akora miaro ny hoditra amin’ny masoandro, isan’andro. Tsy azo adinoina anefa fa loharanona vitamina D ihany koa ny masoandro, izay ilain’ny vatana. Noho izany, ilaina ny mivoaka amin’ny masoandro, saingy tsy maintsy ferana no sady arovana ny tarehy.
Eo amin’ny faha-25 taona no atomboka ny ady amin’ny kentrona, fa tsy andrasana hihanaka be izy ireo vao hokolokoloina ny hoditra. Araka izany, sorohina aloha ny fipoirany. Ireto avy ny atao :
- 20 taona : Mihamaina tsikelikely ny hoditra. Diovy sy amandino, maraina sy hariva.
- 30 taona : Mihamarefo ny hodi-tava. Manao “gommage” isa-kerinandro mba hanalana ny sela maty sy hanavaozana ny hoditra. Amandinina tsara ny faritry ny maso.
- 40 taona : Manomboka mihamanify ny takolaka, misy kentrona madinika koa. Mampiasa “soin anti-rides” amin’izay ary manao maska isa-kerinandro. Atomboka tsikelikely ny “crème de nuit”.
- 50 taona : Matoy tanteraka ny tarehy ka mitsabo ireo lesoka no atao. Manafina ny kentrona, ny tasy… Mampiasa “serum hydratant” + “crème du jour” mifanaraka amin’ny tarehy foana. Tsy adino ny « crème de nuit ».